Debadbaxyada Baydhabo oo weli socda & Shariif Xasan oo yiri “6-da gobol lama wada tegi karo” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Debadbaxyada Baydhabo oo weli socda & Shariif Xasan oo yiri “6-da gobol lama wada tegi karo”
A warsame 26 March 2014 4 April 2019
Baydhabo – Mareeg.com: Maalintii afaaraad ayaa waxaa magaalada Baydhabo ka socda debadbaxyo looga horjeedo xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaasoo riixaya dhismaha maamul 3 gobol ah, iyadoo debadbaxyada ay abaabulayaan siyaasiyiintii dhisay maamulka 6-da gobol ee uu madaxda u yahay Madoobe Nuunow Maxamed.
Dadka debadbaxaya ayaa doonaya in Shariif Xasan isga baxo magaalada Baydhabo, iyadoo Shariif ku adkeysanayo inuu magaalada sii joogayo, islamarkaana uu wax ka dhisayo maamulka 3-da gobol ee shirkiisu ka socdo hotel Bakiin ee Baydhabo.
Mudaharaadka ka dhanka ah Shariif Xasan ayaa saaka xilli hore bilowday kadib markii xalay wiil shalay ku dhaawacmay rasaas lagu riday dadka debadbaxayey uu xalay ku geeriyooday isbitaalka magaalada Baydhabo.
Xildhibaan Shariif Xasan Sheeh Aadan ayaa sheegay inaysan doonayn inay dadka Baydhabo iska horkeenaan oo dhibaato dhacdo, ayna taageerayaashooda ku wargeliyeen inaysan rabshado ka sameyn karin magaalada, wuxuuna intaa ku daray inaysan doonayn in dhibaato ay dadi ku dhintaan ay Baydhabo ka dhaco.
“Innagu waan sameyn karnaa kuwo la mid ah dibadbaxayada magaalada Baydhabo laga sameynayo, balse ma doonayno inaan shacabka Baydhabo iska horkeenno oo ay dhimasho dhacdo,” ayuu yiri Sharifi Xasan.
Sidoo kale, xildhibaanka ayaa sheegayi n go’aanka ay kaga baaqsanayaan dibadbax ay ka dhigaan Baydhabo ay iyagu gaareen, wax rabashado ah oo ay illaa hadda ka sameeyeen magaaladaasna aysan jirin.
“Dadka dibadbaxyada ka dhigaya Baydhabo waa dad lasoo ururiyay oo aad u yar, waxaana laga dhaadhiciyay wax aan jirin,” ayuu xildhibaanku kaga jawaabay su’aal ahayd inuu sharraxaad ka bixiyo cidda dibadbaxayada looga horjeedo ka dhigaya Baydhabo.
Xildhibaan Shariif Xasan oo sii hadlayay ayaa sheegay in dadka dhisay maamulka lixda gobol laga doonayo inay maamulkooda hirgeliyaan oo ay deegaannada uu ka taliyo ay geeyaan oo maamulo u sameeyaan.
“Waxaa in la is-weydiiyo mudan ma tegi karaan deegaannada ay sheegayaan in maamulka ay dhiseen uu ka taliyo, runta in la isku sheego ayaa wanaagsan. Annagu waxaan qabnaa inaysan tegi karin, waxa keliya oo ay tegi karaan waa gobollada aan doonayo inaan maamulka u sameyno, mana jirto meel kale oo ay tegi karaan,” ayuu Shariifku hadalkiisa raaciyay.
Siyaasiyiinta abaabulay dadka ku debadbaxaya Shariif Xasan ayaa sheeganaya in maamulkooda 6-da gobol ay hoos imaanayaan gobollkada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo oo horay loogu dhisay maamulka Juba oo dowladda Soomaaliya aqoonsan tahay.
R/wasaare Cabdiweli oo Uganda uga qeybgelaya shir ku saabsan aabaraha iyo biyo-yarida
Qaxootiga Soomaalida oo lagu amray iney ka baxaan magaalooyinka Kenya